Bahrain - Israel ho tonga mpinamana anio
Home » etn » Bahrain - Israel ho tonga mpinamana anio
Ny delegasiona amerikanina-israeliana iraisana dia mivory ao Bahrain anio hanasonia andiana fifanarahana roa tonta eo amin'i Israel sy Bahrain, ao anatin'izany ny antsoina hoe Joint Communiqué izay hametraka ara-dalàna ny fifandraisana ara-diplaomatika eo amin'ny firenena roa tonta.
El Al Flight 973 dia voalahatra hiala amin'ny seranam-piaramanidina Ben Gurion any Tel Aviv mankany Manama amin'ny 11.00 maraina, izay sidina voalohany indrindra tsy miato ara-barotra avy any Israel mankany amin'ny fanjakan'ny Helodrano. 973 koa no kaody fanjakan'ny telefaona ho an'i Bahrain. Ny marika mitovy amin'izany dia nampiasaina tamin'ny UAE.
Ny alahady hariva dia hitohy any amin'ny Emira Arabo Mitambatra ny delegasiona amerikana notarihan'ny sekreteran'ny Tahirimbolam-panjakana Steven Mnuchin ny iraky ny White House tamin'ny ady Israeliana-Palestiniana Avi Berkowitz.
Saingy, mifanohitra amin'ireo tatitra vao tsy ela akory izay, ny delegasiona israeliana - notarihin'ny Mpanolotsaina ny Filaminam-pirenena Meir Ben-Shabbat sy ny talen'ny jeneralin'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny Alon Ushpiz - dia tsy hanatevin-daharana ireo mpiara-miasa aminy amerikana ao Abu Dhabi. Raha ny tokony ho izy dia kasaina hiverina any Isiraely izy ireo amin'ny alahady hariva.
Ny talen'ny praiminisitra mpisolo toerana jeneraly Ronen Peretz dia hanatevin-daharana ny dia ihany koa, toy izany koa ny talen'ny jeneraly minisitera israelianina vitsivitsy. Amin'ny talata izao dia antenaina ny delegasiona zokiolona UAE, ao anatin'izany ny minisitra kabinetra roa ambony, no tonga any Israel hisahana ny lafiny roa ny fifanakalozan-kevitra niompana tamin'ny fanatanterahana fifanarahana ara-dalàna miaraka amin'i Israel izay nosoniavina tany Washington tamin'ny volana lasa.
Amin'ny sabotsy tolakandro dia hanao sonia taratasy fifanarahana marobe i Israel sy Bahrain, ao anatin'izany ny “Communequé Mixte amin'ny fananganana fifandraisana diplomatika, fandriam-pahalemana ary fisakaizana.”
Andrasana koa ny fifandraisana eo amin'ny fizahantany.
Tsy mazava ny resaka raha hoentina any amin'ny kabinetra israelianina sy / na ny Knesset ity antontan-taratasy ity mba hahazo fankatoavana. Toa azo inoana fa ny mpisolovava Jeneraly Avichai Mandelblit dia mitaky ny hanaovan'ilay minisitra fanekena farafaharatsiny farafaharatsiny, satria misy adidy maro avy amin'ny Israel izany.
Mpandresy ny fizahantany maharitra SKAL